iFixit iqinisekisa ukuthi ibhethri le-Apple Watch entsha linamandla amakhulu | Izindaba zamagajethi
NgoSepthemba 7, inkampani ezinze eCupertino yethule amamodeli amasha we-iPhone, ama-headphone angenantambo e-AirPods kanye nesizukulwane sesibili se-Apple Watch, isizukulwane sesibili esisilethe njengezindaba ezintsha ukumelana namanzi kanye ne-GPS eyakhelwe kudivayisi. Ukuze idivaysi ikwazi ukusebenzisa i-GPS ngaphandle kokuthi ibhethri lithinteke kakhulu, i-Apple isebenzise lokhu kuvuselelwa ukukhulisa usayizi webhethri, njengoba kuqinisekiswe ngokusemthethweni ngabafana be-iFixit, ngemuva kokukhipha lesi sizukulwane sesibili se-Apple Watch esivela eManzana.
Kepha ngaphandle kwe-GPS, emele ingxenye ebalulekile ekusetshenzisweni kwebhethri ledivayisi, ukukhanya kwesikrini se-OLED nakho kwandisiwe kulesi sizukulwane sesibili sedivayisi. Njengoba sibona ezithombeni eziboniswe yi-iFixit, imodeli engama-38-millimeter, okuwukuphela kwabo abakwazile ukuyihlaziya kuze kube manje, isinikeza ibhethri lama-273 mAh, uma kuqhathaniswa ne-205 mAh yemodeli yesizukulwane sokuqala.
Ngaphezu kwebhethri lomthamo ophakeme, inani le-glue elizokwazi ukuvala isikrini se-OLED ku-chassis yedivayisi nalo lenyusiwe ukuze unikeze ukumelana namanzi i-Apple oyisebenzisile kule divayisi. Okunye okusha okusilethele lesi sizukulwane esisha yisipikha esisha, esenzelwe ukuthi sikwazi ukuxosha amanzi njalo lapho sisebenzisa lapho sibhukuda.
Ekuqalisweni kwalesi sizukulwane sesibili, akuyona inguquko enkulu ngokwemisebenzi futhi baningi abasebenzisi abajabulela isizukulwane sokuqala, abahleleli ukukhuphula idivayisi yabo kumodeli yesizukulwane sesibili, ikakhulukazi uma bengahlelile ukusebenzisa i-GPS nokumelana namanzi (okucwilisekayo kuze kufike kumamitha angama-50) kuyinto yesibili kubo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » SmartWatch » iFixit iqinisekisa ukuthi ibhethri le-Apple Watch entsha linamandla amakhulu
Ungawagcina kanjani amafayela wakho we-Google ngeGoogle Takeout